Midawga Yurub oo Ka Dayriyay Xuquuqda Aadanaha Ethiopia - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Midawga Yurub oo Ka Dayriyay Xuquuqda Aadanaha Ethiopia
Published on Monday, 22 July 2013 22:13	Xogta Shacabka (Brussels) Koox xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamanka midowga yurub, ayaa booqasho ku tagay dalka Itoobiya 15kii ilaa 17kii bishan July ee aan ku jiro,kuwaasoo ka keenay niyad jab aad u wayan heerka xuquuqda adanaha ah ee ka jirta dalka Itoobiya. Wufuudan ayaa sheegay, inay soo arkeen wax laga naxo heerka uu marayo xaalada dadwaynaha Itoobiya oo uu saameeyay sharciga xun ee loo isticmaalay hayadaha gargaarka fidiya iyo xoriyada saxaafada.
Waxay kooxdani sheegtay in aysan u suurta galin inay booqdaan xabsiyada ay ku jiraan dadka siyaasada loo hayasto, diidmo ay kala kulmeen dawlada darteed oo aan u ogalaan inay soo arkaan xaalada guud ee maxaabiista ku xidhan xabsiyada dalka Itoobiya. Wufuuda ayaa sheegay inay aad uga wal walsan yihiin sida ay wax u socadaan oo hadii aan wax laga qaban ay ka dhici karto xaalad masiibo iyagoo ay guddigani kula taliyeen dawlada Ethiopia inay wax ka badasho sharciyada foosha xun ee ay u isticmaasho dadka shacabka ah ee dalkeeda.
wadanku malaha saxafad xora waxaana ka sii dhimanaya dimoqradiyadii, waxaa batay cadaadiskii iyo cabudhintii sida lagu sheegay warbixinta hordhaca ah ee ay soo saareen wufuuda ka socotay Midowga Yurub. Waxay sheegen oo kale gudigu, in sharciyadan ay samaysatay Xukumadu inay wax wayan u dhimeen nolashii dadka ku dhaqan dalka Itoobiya, iyada oo ay ka tagantahay Itoobiya Xaalad liidata, oo samaysay dadka saboolka ah iyo kuwa kale ee caadiga ah
Wufudan ayaa soo jeediyay in xukumada ay xabsiga ka sii dayso dhamaan suxufiyiinta iyo siyaasiyiinta mucradka ah ee xabsiga ku jira isla markana ay damaand qaado, xoriyada iyo afkaarta dadka, si ay uugu horsedo, sanadka 2015ka dorashada dhacaysa inay noqoto mid xor ah.
Gudigan ama wufuudan ayaa sheegay in Itoobiya ay leedahay Dastuur fiican marka aad aragto sida uu u qoranyahay lakiin ku dhaqankiisu waa mid ka duwan sida uu u qoranyahay, waxaan leenahay xukumadu ha la imaato is badal dhaba fariintanadu waa midii uugu danbaysay ayay yiraahdeen, wufuuda reer yurub.